बर्दियामा बा'घको आ'क्र'मणबाट एक महिलाको गयो ज्या'न - दैनिक नेपाल न्युज
बर्दियामा बा’घको आ’क्र’मणबाट एक महिलाको गयो ज्या’न
बर्दिया, १८ जेष्ठ: बर्दियामा पा’टेबा’घको आ’क्र’मणमा परी एक महिलाको ज्या’न गएको छ । जिल्लाको मधुवन नगरपालिका–५ बस्ने नन्दकला थापा क्षेत्रीको पा’टेबा’घको आ’क्र’मणमा परी ज्या’न गएको हो ।
बेल्झुण्डी सामुदायिक वनमा निगुरो टिप्ने क्रममा ६६ वर्षीया उहाँलाई पा’टेबा’घले आ’क्र’मण गरेर जङ्गलभित्र लगेको थियो । खोजी गर्दा मृ’तावस्थामा फेला पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वरी कार्कीले बताउनुभयो । (रासस)
बट्टाईको अण्डा किन खाने ! बट्टाईको अन्डा कसरी खाने?
१५ वर्षकी बालिका मकैबारीमा मृ’त फेला, माइजु र गाउँलेको पर्यो च’र्काच’र्की, खुल्यो ड’रला’ग्दो भित्री र’हस्य र नालीबेली (भिडियो सहित)